सिराहमा २१ बर्षीया महिलालाई ज्यूँदै जलाइयो, कस्ले लगायो मट्टितेल छर्केर आगो ? - Nepal's Digital News Paper
सिराहमा २१ बर्षीया महिलालाई ज्यूँदै जलाइयो, कस्ले लगायो मट्टितेल छर्केर आगो ?
सिराह । सिराहमा एक महिलालाई ज्यूदै जलाइएको छ । सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का बेचन मण्डलकी श्रीमती २१ वर्षीया कञ्चन मण्डललाई मट्टितेल छर्केर आगो लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ज्यूदै जलाएपछि शक्त घाइते भएकी कञ्जनलाई उपचारका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याएको छ । डाक्टरहरुले त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने बताएपछि काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको छ । कञ्चनको शरीरको ८० प्रतिशत भाग जलेको र अवस्था गम्भीर रहेको सिरहा प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक माधव खरेलले बताए । तर कञ्चनलाई कसले आगो लगायो ? त्यो भने खुल्न सकेको छैन ।
‘दुई खालका कुरा आएका छन्, अरूले आगो लगाइदिएका हुन् कि उनी आफैंले भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन, अनुसन्धान गर्दैछौं,’ प्रहरी प्रवक्ताले भने , ‘उनका सासू तथा छिमेकीलाई ल्याएर सोधपुछ गरिरहेका छौं, श्रीमान् भने फरार छन्।’
धनुषामा केही दिनअघि एक महिलालाई ज्युँदै आगो लगाएर मार्ने प्रयास गरिएको थियो । धनुषामा घटना भएको एक साता नबित्दै अर्काे जघन्य अपराध सिराहमा घटेको छ । वैशाखमा धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका १ की २० वर्षीया निर्मला यादवलाई पति मुकेश यादवले शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइदिका थिए।